12 ဥရောပမှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 ဥရောပမှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ကောင်းကင်တမန်များ, လတ်ဆတ်သည်, မှန်ရောင်စုံခြယ်ထားသောတောက်ပသောပြတင်းပေါက်များ, ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအစိတ်အပိုင်းအချို့သည် 12 ဥရောပ၌စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း. ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတိုင်းသည်ပိုမြင့်သည်, ပိုကြီး, တခြားဟာတွေထက်ပိုစွဲမက်စရာကောင်းတယ်, တစ်ခုချင်းစီ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်.
1. Duomo ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, မီလန်
မီလန်သည်နှစ်စဉ်ခရီးသွားသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်သည်. မီလန်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, Milan ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ပထမတစ်ချက်ကနေမင်းကိုအံ့သြသွားစေမယ့်မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲ. ကြာသည် 600 အီတလီတွင်အကြီးဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ, ပြေပြစ်သည်, လှပသော, ပေါ့ပါးသောပန်းရောင်စကျင်ကျောက်ဖြင့်အံ့မခန်း.
မှန်ပြတင်းပေါက်များ, Gothic ဒြပ်စင်များ, ထိပ်၌ Madonnina ရွှေရုပ်တုသည်မင်းကိုစွဲဆောင်စေမည့်အစိတ်အပိုင်းအချို့သာဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင်အမှန်တကယ်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော Gothic Milan ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုအမှန်တကယ်လေးစားချင်ပါက, ပြီးရင်မင်းခေါင်မိုးပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်. ဒါကြောင့်, Milan ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သည်, မင်းခေါင်မိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့နေရာ.
2. Sagrada Familia ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ဘာစီလိုနာ
တစ်ခုတည်းသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ယခုအချိန်ထိတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည် 1882, Gaudi's Sagrada Familia ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်. Sagrada ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်စပိန်နှောင်း Gothic နှင့်ရောနှောထားသည်, Art Nouveau, Catalan Modernism ဗိသုကာလက်ရာများ. Gaudi ၏ဒီဇိုင်းသည် 18 spiers, ကိုကိုယ်စားပြုဖို့ 12 တမန်တော်, အပျိုစင်မေရီ, ဧဝံဂေလိတရားလေးပါး, နှင့်အမြင့်ဆုံးယေရှုခရစ်.
ဖြည့်စွက်ကာ, မျက်နှာစာသုံးခုစီတွင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအပြင်ပန်းရှိသည်: Passion မျက်နှာစာ, ဘုန်း, မွေးဖွားမှုမျက်နှာစာ. ဒါကြောင့်, ကြည့်ရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များစွာ, သင်၏ဘာစီလိုနာသို့သင်၏ခရီးကိုကောင်းစွာစီစဉ်ပါ, ဤအံ့သြဖွယ်ဘုရားကျောင်းကိုလက်လွတ်မခံရန်.
3. ဥရောပမှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း: Kolner ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, Cologne
ဆောက်ပြီးပါပြီ7ရာစုနှစ်များစွာ, Cologne ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် Gothic ဗိသုကာများ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သင်္ကေတဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, Cologne ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် Cologne ၏ Archbishop နှင့်ဥရောပအားလုံး၌အမြင့်ဆုံးနွေ ဦး ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်.
စိတ်ဝင်စားစရာ, ဤခမ်းနားထည်ဝါသောအထင်ကရနေရာသည်ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းတည်ငြိမ်သောမြက်ခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်. ယနေ့တွင်, ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရဲ့သမိုင်းမှာဒီအဆင့်ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုသင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး. မှန်အတွင်းမှပြတင်းပေါက်မှန်များနှင့်ဘဏ္asuresာများဖြင့်အပြင်ဘက်ကဲ့သို့လှပသည်. Kolner Dom သည်အထူးသဖြင့်ညဘက်နှင့်နေဝင်ချိန်မီးများကြောင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်သည်.
4. Santa Maria Del Fiore ၏ Basilica, Florence
ပန်းရောင်, အစိမ်းဖျော့ရောင်, နှင့်အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်မျက်နှာစာ, အတွင်းမှ mosaic ကြမ်းပြင်များ, Basilica di Santa Maria သည် Florence ရှိထူးခြားဆန်းသစ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, မျက်နှာဖုံးပေါ်မှနှောင်းတရားစီရင်ချက်၏ Giorgio Vasari ၏နံရံဆေးရေးပန်းချီများသည်အနုပညာချစ်သူများလက်မလွတ်စေရ.
Florence ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်မှတ်တိုင်တစ်ခုထက်ပိုသည်. အနုပညာကိုစိတ်မ ၀ င်စားရင်တောင်, ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကမင်းကိုစွဲလန်းစေမယ့်အံ့မခန်းအနုပညာလက်ရာတွေကိုနာရီပေါင်းများစွာစွဲလမ်းနေစေလိမ့်မယ်. သင်လတ်ဆတ်သောလေကိုရှုရှိုက်လိုသည်, ထို့နောက်မှော် Florence ရှုခင်းများအတွက် Brunelleschi Cupola သို့တက်ပါ.
5. ဥရောပမှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း: Charles ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ဗီယင်နာ
ဗီယင်နာ၏သင်္ကေတ, စိန့်. Charles ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အဖြူရောင်မျက်နှာစာနှင့်အစိမ်းရောင်အလင်းတန်းများဖြင့်အံ့မခန်းဖြစ်သည်. Baroque ပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်, စိန့်. Charles ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဧည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်သည် 19ကြိမ်မြောက် ရာစု. ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုနာယကသူတော်စင် Charles Borromeo ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်, feeder ကို, ဥရောပတိုက်၏ကပ်ဘေးများ၌ခံစားနေရသောဝန်ကြီး 16ကြိမ်မြောက် ရာစု.
သို့သျောလညျး, St ၏စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအင်္ဂါရပ်. Charles Basilica သည် 1250 copula ရှိစတုရန်းမီတာ frescos. အခြားဥရောပဘုရားကျောင်းများနှင့်မတူပါ, ဤနေရာတွင်နံရံဆေးရေးပန်းချီများအားအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန် panoramic ဓာတ်လှေကားစီးနိုင်သည်. ဒါကြောင့်, ကောက်ချက်ချရန်, စိန့်. ဗီယင်နာရှိ Charles ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်သင်၏လက်လွတ်ခံရန်မသင့်ပါ ဥရောပ၌မြို့အားလပ်ရက်.
6. Le Mans ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ပြင်သစ်
Saint Julian အတွက်ရည်စူးသည်, Le Mans ၏ပထမဆုံးဘုန်းတော်ကြီး, Le Mans ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ပြင်သစ် Gothic စတိုင်နှင့် Romanesque nave ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောဗိသုကာရောစပ်မှုဖြစ်သည်. မင်းရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မယ့်စွဲဆောင်မှုတစ်ခုကအပြင်ပန်းကိုခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အပြင်ဘက်ကိုပံ့ပိုးပေးနေတယ်. ထို့ကြောင့် Le Mans Cathedral ၏မျက်နှာစာသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
ထို့အပြင်, ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရဲ့မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာဆေးသုတ်ထားတဲ့စတီးမှန်နဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေက Le Mans ကိုထည့်လိုက်တယ်’ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်ဤနှစ် ၅၀၀ သက်တမ်းရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်းရှာဖွေရန်ရတနာများစွာကိုထားခဲ့ပါ.
7. ဥရောပမှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း: စိန့်. ပေါလုရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, လန်ဒန်
၎င်းသည်လန်ဒန်၏ skyline ကိုလွှမ်းမိုးထားသည်, ဒါပေမယ့်အပြင်ပိုင်းမှာ, Saint Paul ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးအထင်ကရနေရာများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ. St.. သင်ဝင်ရန်အချိန်ယူလျှင်ပေါလု၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အလိုလိုပေါ်လာလိမ့်မည်. ထိုအခါ, အဖြူနှင့်အနက်ရောင်ပုံစံမျိုးကစားခြင်းကြောင့်သင်အံ့သြသွားလိမ့်မည်. ထို့အပြင်, ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအိမ်များထက်ပိုသည် 300 ဗြိတိန်၏အကောင်းဆုံးသောအမှတ်တရများ, Wren ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ခမ်းနားကြီးကျယ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သူဖြစ်သည်.
သို့သျောလညျး, စိန့်ရှိစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာများ. Paul's Cathedral သည်တီးတိုးပြခန်းဖြစ်သည်. ဟုတ်ကဲ့, ပြခန်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတီးတိုးပြောရင်, နံရံများသည်အခြားတစ်ဖက်သို့သယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်.
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့သော်လည်း, ဘာလင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်စမ်းရေတွင်းနှင့်မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းများပါ ၀ င်သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်. ဘာလင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဘာလင်မြို့နန်းတော်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဗိသုကာပညာရှင် Julius Carl Raschdorff က St.. လန်ဒန်ရှိ Paul's Cathedral. ၌သာ 1993, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြီးစီးခဲ့သည်, ဘာလင်တံတိုင်းကြီးပြိုလဲပြီးနောက်.
ဘာလင်မြို့ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာများမှာနံရံဆေးရေးပန်းချီများဖြစ်သည်, ရွှေအဆင်တန်ဆာများ, နှင့်ရုပ်တုများ. ဖြည့်စွက်ကာ, ၎င်း၏အချစ်ရေးနှင့်နှလုံးသားကိုအရည်ပျော်စေသောတေးဂီတနှင့်အတူ Saucer အင်္ဂါသည်ဂျာမနီတွင်နောက်ဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးအချစ်ရေးအင်္ဂါဖြစ်သည်။. ထို့ကြောင့်, ဘာလင်မြို့မြင်ကွင်းများအတွက်ကြည့်ရှုရန်ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့တက်ပါ 12 ဥရောပ၌စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း.
9. ဥရောပမှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း: မုနိ Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, မော်စကို
တစ်ခုမှာ ရုရှား၌လည်ပတ်ရန်စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနေရာများ မော်စကိုရှိ Saint Basil ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သည်. သင်ဤအံ့သြဖွယ်ရာဘုရားကျောင်းကိုလက်လွတ်မခံဘဲ Red Square နှင့်အခြားမည်သည့်နေရာမှမဆို၎င်းကိုမြင်ရလိမ့်မည်. သင်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ, ပတ် ၀ န်းကျင်၌အခြားဘုရားကျောင်းကိုးကျောင်းနှင့်အတူအလယ်ဗဟိုဘုရားကျောင်း.
စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာဤဘုရားကျောင်းများကိုအထူးလှောင်အိမ်များဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည်. ကြောက်စရာကောင်းသောအိုင်ဗန်သည် Saint Basil ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်သူဖြစ်သည်, အရောင်အသွေးမျိုးစုံသည်ယနေ့ထိနက်နဲသောအရာဖြစ်သည်. ဤဒီဇိုင်းပုံစံသည် ၁၇ ရာစုတွင်ပေါ်ထွက်လာသည်, ဒါပေမယ့်အရောင်ရွေးချယ်မှုကိုတော့မသိရသေးပါဘူး.
10. Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ပဲရစ်
gargoyles နှင်းဆီများနှင့်အရောင်တင်မှန်ပြတင်းပေါက်များရှိသည်2Paris မှ Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သန်းနှင့်ချီသောအခြားဧည့်သည်များကဲ့သို့သင်တို့ကိုဆွဲဆောင်မည့်အင်္ဂါရပ်များ. အပြင်ပန်းမှာလှတယ်, ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အထဲမှာ, ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ဘဏ္asာတိုက်သည်သင့်အားကမ္ဘာ့အချစ်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ထက်သင့်ကိုတက်စေလိမ့်မည်, အဘို့ မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီးသည် Ile de la Cite ၌ရပ်ပြီး Blessed Virgin အားရည်စူးသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်နပိုလီယံဘိုနာပတ်၏နန်းတက်ပွဲကဲ့သို့အဓိကအခမ်းအနားများအတွက်နေရာဖြစ်သည်, Arc of Joan ၏ရိုက်နှက်ခြင်း. ထို့ကြောင့်, မင်းမျက်လုံးတွေကဘုရားကျောင်းရဲ့ဗိသုကာလက်ရာတွေရဲ့အလှကိုအထင်ကြီးလေးစားလိမ့်မယ်, ဘုန်းကြီးသောဒဏ္ာရီပုံပြင်များကိုသင်နား ထောင်၍.
11. ဥရောပမှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားကျောင်း: စိန့်မာ့ခ်ျဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ဗင်းနစ်
၎င်းသည်ဥရောပရှိအလှဆုံး Basilicas များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့် Saint Mark's Basilica အိမ်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်အမွေတွေပါ, ၎င်းကိုဥရောပရှိဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်. ဒဏ္ာရီတွေအရ, Saint Mark's Basilica ကိုဧဝံဂေလိဆရာမာ့ခ်ျ၏လက်ရာများကိုတည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, တမန်တော်လေးပါးအနက်တစ် ဦး, ကုန်သည်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်မှခိုးယူပြီးနောက်. ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ၁၃ ခုပါပါတယ် ရာစု mosaic, Basilica ထဲသို့ ၀ င်လာစဉ်ဘယ်ဘက်တံခါးအထက်.
ထို့အပြင်, Saint Mark's Basilica သည်တော်ဝင်မိသားစုသရဖူဖြစ်သော Pala dOro ထက်အဖိုးတန်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်. Pala သည် Byzantian အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်, ကျော်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့သည် 2000 ကျောက်မျက်ရတနာများ. ကောက်ချက်ချရန်, မင်း Venice မှာရှိတဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုကိုသွားလည်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, Saint Mark's Basilica သည်တစ်ခုဖြစ်သည်, စပ်စုဘို့, အလှအပနှင့်သမိုင်းကိုမြတ်နိုးသောခရီးသွားများ.
12. စိန့်. Vitus ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ပရာ့ဂ်
မြစ်များကို ဖြတ်၍, နှင့်တံတားများ, ဒဏ္legendaryာရီ Prague ရဲတိုက်၌, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to6Gothic ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုပြီးစီးရန်ရာစုနှစ်များစွာ, Prague ရှိအထင်ရှားဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးမှတ်တိုင်သို့. Saint Vitus ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ယူမှုသည်ဗိသုကာပုံစံများရောစပ်မှု၌ထင်ဟပ်နေသည်.
Saint Vitus ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် Renaissance ရှိသည်, Gothic, နှင့် Baroque ဒြပ်စင်: တောင်မျှော်စင်၏အချင်းနှင့်မြောက်ဘက်ရှိအင်္ဂါကြီးကဲ့သို့. မှန်စွန်းပြတင်းပေါက်များသည်မည်သည့်ဘုရားကျောင်းနှင့် St.. Vitus ၏ပြတင်းပေါက်များသည်ဥရောပရှိအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများမှအလှတရားကိုမကျဆင်းစေပါ.
W ကe သည်မမေ့နိုင်သောခရီးတစ်ခုစီစဉ်ရန်ကူညီရန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည် 12 ဥရောပ၌ရထားဖြင့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ, လောကထဲကိုဝင်ပါ တစ်ဦးကရထား Save.
ငါတို့ blog post ကို embed လုပ်ချင်ပါသလား“ 12 ဥရောပ၌စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ” သင့် site ပေါ်တွင်? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Beautifulcathedralseurope ဘုရားရှိခိုးကြောငျး Duomo famouscathedralsineurope FascinatingCathedrals